Umlawuli weBentley Geospatial, Izinyo elibuhlungu - iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Umlawuli weBentley Geospatial, kwiinyopho
Umlawuli weBentley Geospatial, kwiinyopho
Umlawuli weBentley Geospatial yenye yezinto uBentley angakhange akwazi ukuyenza kwaye ayibikho imithambo emininzi echaza ukuphunyezwa kwayo kwiprojekthi yokwenyani. Injongo yesi sixhobo, esincedisana neMephu ye-Bentley, kuko konke ukwakhiwa kweprojekthi okwenziwe ngaphambili kwiJografi, njenge:
Qwalasela uxhumano kwi database
Chaza imigaqo yepolotiki
Nangona kunjalo, yonke into ebesiyazi malunga neJografi ayisebenzi kangako, kuba ukusebenza koMlawuli weGeospatial kuthathwe isiqingatha ukukhwela. Inezinto ezininzi ezinokubakho, nangona ifihlwe ngasemva kweqhosha lasekunene le mouse; ebiza kakhulu ekuqaleni.
Iingenelo zoMphathi weGeospatial.
Ukuthelekisa oko kwenziwa ngeGeographics, ezi zizinto ezintle:
Iimpawu zefayile, ndithetha, ngaphambi kokuba ezininzi iinkqubo zenziwe zingenayo i-plugin ecacileyo.
Inkqubo engaphantsi, ngaphambi kokwenza oku kufuna ukudibanisa kunye nekhodi yeefayili .ucf kunye nokunye.
Iimpawu zangempela, ngoku, isimboli asiyiyo impawu ye-CAD, njengangaphambili kodwa inxulumene ngokupheleleyo nombono
Isilinganiselo, iimpawu ziyakwazi ukulinganisela iimpahla, ngoko ziboniswa okanye zifihlwe kwiikali ezichanekileyo
Imiyalelo ehambelana neempawu, ezi ziyimpawu zokwakha ezichazwe ekudalweni kwezinto, njengokuthi: xa ndiza kudala i-axis yesitalato, umyalelo we-linestring usebenza ngokukhawuleza; Oku kuthiwa iindlela.
Imephu inedatha, kunokwenzeka ukuchaza ukuba mangaphi iimpawu okanye idatha eya kuba ngaphakathi kwe-xml yemephu, ukuze i-dgn iqulethe idatha ngaphandle kokufuna ukuba unxibelelwano kwiziko ledatha okanye iifayile ezongezelelweyo.
Unxibelelwano oluxhomekeke ngqo, xa ulungisa okanye uvuselela, akukho ukungahambelani, njengoko kwenzeka ngaphambili ngenxa yokuba unxibelelwano lungadala into ngaphandle kokubhekisela kwiziko ledatha.
Isixhobo ngokwaso somelele kakhulu, okwenzekayo kukuba kunzima ukusisebenzisa. Kwimeko, Bentley Cadastre isicelo esakhiwe ne-Geospatial Administrator ukuba ukongezwa kukho umqeqeshi okhokela ukulungiswa kokuqala.
Umhlobo weza kum ngelinye ixesha, wandibuza ukuba ndingayichaza na ... kwizithuba ezininzi ndiyathemba ukuyenza, kuba ngoku ndijonge iBentley Imephu V8i kwaye ndiyabona ukuba abahlehli kwisidingo sokongeza iwizard kule phazili. Okwangoku isithuba sihlala kwinqanaba ngokubanzi.
Imbali kunye nengqiqo
Umlawuli weGeospatial uvela kulungelelwaniso lobuchwephesha be-xml kwiMicrostation V8.5 eyaziwa njengeXFM. Ukusukela kwiMicrostation V8.9, eyaziwa njengeXM Geographics ibizwa ngokuba yi-Bentley Imephu kwaye yindlela ebizwa ngokuba yiV8i.
Ngokukodwa iiprojekthi ezineBentley zihlelwe kulo mgca, njengoko kuchazwe ngumhlobo wethu uMartin:
Iprojekthi (iprojekthi) ............................ Ngokufanayo nesikolo
Umzekelo: Iprogram yeCadastre
Iiklasi (Iiklasi) ............... .. ezilingana nama degree
Umzekelo: Iimpawu: i-cadastral, indlela, amahlathi, i-hydrological ...
Iimpawu (Izixhobo) ......................... ezilingana nezifundo
Umzekelo: i-axis yesitrato, i-polygon estate, ibhuloho ...
Iimephu (iMaphu) ..................................... elilingana nabafundi
Umzekelo: Imephu yeHJ44-2D.cat, indawo yehlathi B.for, 0311.hid
Ngaphambili, yonke le nto ibisakhiwa kwicala leJografi, ngoku, lonke ubumbeko lohlulwe kuMlawuli weGeospatial, kusale ulwakhiwo kuphela kwicala lomsebenzisi weBentley Imephu. Njengokuvula imephu x, ukubonisa uluhlu lwamacandelo, ukwabela amanqaku kuyo, ukuyicacisa, ukuqinisekisa ubume bayo, ukuhlalutya umaleko wendawo ... njl.
Ngoko uMlawuli weGeospatial ufana nenye indlela ulungelelwano lwe-Geodatabase, kuphela ukuba luqulethe luqobo ngaphandle kweempawu zeprojekthi yonke.
Ulwakhiwo loMlawuli weGeospatial
Oko sinakho isakhiwo somthi woqwalaselo oluthile oluqhutywa yiprojekthi, ngenzuzo eyenziwa ngoku yonke into esuka apha.
Uqwalaselo luqokelelwe kwi:
Impawu kubo bonke abasebenzisi ngokubanzi (Bonke abasebenzisi)
Zonke ezi ziyi-projekthi zeprojekthi.
Las iindidi balapha kweli nqanaba kwaye kungekhona kumsebenzisi othile.
Imigangatho ipolotiki kunye noqwalaselo lwe database apho le projekthi ixhunyiwe.
Indawo yokusebenzela yomsebenzisi
Ezi sele zinendawo yokusebenza eyaziwa ngokuba ngumsebenzisi, okanye into esiyibize phambi kwe-ucf;. Ngokungafaniyo neparameter ngokubanzi, inokuqulatha:
Umsebenzi -kodwa kunye neendlela zento nganye. Unokuchaza ukuba zeziphi izinto umsebenzisi anokuba nazo.
-I-Archives, njengembewu okanye iilayibrari ezabelwana ngazo
-Macros kunye nezixhobo zokusebenza ezilungiselelwe umsebenzisi.
Konke oku kunokwenzeka kwiiGographics ngefayili ye-.ff, eyavumela ukuvula ngokucacileyo iGoographics kwiprojekthi echaziweyo, kunye nezixhobo eziyimfuneko ... kodwa yenziwa ngekhowudi ecocekileyo.
Isichazi seenkqubo zokuqhagamshelanisa
Nazi iinkqubo ezahlukeneyo zokulungiselela iinkqubo
Imithombo yedatha yolwazi
Apha achazwa iinkqubo zokufikelela kwiinkcukacha zolwazi ngeendawo nge-Oracle, kunye ne-Index ekhoyo kwifayile eneenkcukacha zendawo yazo zonke iimephu ezibhaliswe kwiziko ledatha.
Isakhiwo seprojekthi sihlala sisifana ukuba iprojekthi ingeniswa ukusuka kwiiGographics kodwa isakhiwo sitshintsha xa sakhiwe ukususela ekuqaleni:
Ukusuka apha kubalulekile ukukhumbula ezinye iifolda ezithakazelisayo:
idx, apho ifayile yesalathisi kunye neendawo ezihlala kuyo zigcinwa
imbewu, apho iifayile yembewu igcinwa khona
sql, uphando lugcinwa apha
tlr, nakhu iziqulatho zengqondo
wrk, sebenza iifayile
Ngelishwa a ndiyazi ukuba uza kugqiba ekupheleni kwesi sithuba, ukuba umntu uthenge i-Bentley Imephu kwaye engazi indlela yokusebenzisa i-Geospatial Administrator ... ayincedi. Umlawuli weGeospatial utshaywa kakhulu kubasebenzisi abaqala kwi-GIS.
Kodwa akusiyo isono seBentley, ithoyiyi inamandla kakhulu, .NET ungenza izimanga kodwa njenge-Geographics, kunzima ukuba
ukuhamba ngaphandle mega-uncedoKukho imizekelo eza nesoftware, esele ihlanganisiwe. Isono asiyomfundiso iluncedo koku; njengoko injalo, ividiyo elungileyo kakhulu apho iprojekthi epheleleyo yakhiwe khona emva koko ityiswe, iqhutywe kwaye ithunyelwe kwiGeoweb Publisher. Ukuze nabani na oza kuyisebenzisa ayazi indlela emayilandelwe.
Ndiyazi, kuninzi ukubuza kodwa yile nto siyiyo, abathengi esicelayo. Hayi, ndilibele. NgeSpanish ndiyacela.
Ezinye izithuba ezihlobene
I-Latin American Congress of Valorization